Island View Glamping pod - I-Airbnb
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguTracy & Graeme
UTracy & Graeme yi-Superhost
Isiqithi sokuJonga iGlamping Pods kunye neHeilan Coo Pod yethu entsha
zinika indawo yokuhlala epholileyo kwizibini ezinqwenela ukutyelela i-Highlands yaseScotland okanye ukuhamba ngendlela ye-NC500 eyaziwayo yehlabathi.
Ngokujonga okumangalisayo kwiziqithi ekungeneni kwiKyle yolwimi.
Ixabiso lisekelwe ekusebenziseni ubungakanani benkosi KUPHELA
UBUNCINCI OBUSI-2 UKUHLALA
Khangela ngexesha Ngokungqongqo ukusuka ku-4pm
Jonga ngo 11am
I-Stag Glamping Pod yethu eneembono ezintle elwandle kunye neziqithi ezingabamelwane.
4.96 out of 5 stars from 503 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-503
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi503
I-Melness yilali encinci ye-crofting kunxweme olusemantla eSkotlani, ngaphaya kwendlela edumileyo ye-NC500. Sisiseko esihle sokuhlola indawo ejikelezileyo, nokuba yiMpuma okanye iNtshona. Kukho iintaba ezimbini ezintle ezikufutshane nabathanda ukuhamba endulini-uBen Loyal eyiCorbet eyaziwa ngokuba yiKumkanikazi yeeNtaba zaseScotland kunye noBen Hope oyiMunro. Kukwakhona uhambo oluninzi lwaselunxwemeni lwasekhaya oluthatha indawo emangalisayo.
Kukho iilwandle ezininzi ezithandekayo, zonke zingaphakathi komgama wokuhamba nangona ukuqubha kokwabanesibindi kuphela !!
Kukho ihotele / indawo yokutyela ekufutshane kwaye kukho ivenkile egcweleyo / iofisi yeposi engaphantsi komgama oziikhilomitha kwizinto ezibalulekileyo zemihla ngemihla / ipikniki okanye izinto zebbq. Apha kulapho uya kufumanisa ukuba kukho naziphi na iiCeilidhs zasekuhlaleni okanye iziganeko ezenzekayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Kubalobi / amanenekazi anomdla kukho uluhlu olukhulu lweeLochs zalapha ukuze uzame isandla sakho, iimvume zinokuququzelelwa ngokwethu ngaphambi kokufika kwakho.
Iimayile ezimbalwa ukuya phambili uya kufumana ilali yaseTongue, ineehotele ezimbini / iibhari ezibonelela ngokutya okugqwesileyo kunye neevenkile ezimbini enye enepetroli.
Umbuki zindwendwe ngu- Tracy & Graeme
Sobabini mna noGraeme sisuka kule ndawo.
IGraeme inephenyane elincinane, iloba eTalmine Bay kunye neLoch Eriboll yokuloba oonokrwece. Ngelixa ndisebenza kwihotele yalapha eTongue. Ke omnye wethu kufuneka abe malunga nokuba kukho nantoni na esinokuyenza ukwenza ukuhlala kwakho ukonwabele ngakumbi.
IGraeme inephenyane elincinane, iloba eTalmine Bay kunye neLoch Eriboll yokuloba oonokrwece. Ngelixa ndisebenza kwihotele yalapha eTon…